Kuthetha ukuthini ukuphupha iinkomo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha iinkomo
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha iinkomo?
3 Iinkomo ezityebileyo okanye ezityebileyo kunye neenkomo ezinobulali okanye ezomeleleyo
4 Iinkomo zilele, zixheliwe kwaye zafa
5 Ngeenkomo ezimhlophe, mnyama, emdaka okanye ezinamachokoza
6 Iinkomo zibaleka, zitsala iinqwelo, okanye zisitya emadlelweni
7 Iinkomo ziyaphuphuma
8 Ngaba ukuphupha iinkomo luphawu olulungileyo?
Ukuphupha iinkomo kunokubonisa iintlobo ezimbini zeemeko kwaye kuhlala kunomdla kakhulu ukuthetha ngako. Iintsingiselo zinokuba zezintle okanye nokuba zimbi, ke kubalulekile ukuba unike ingqalelo kwizinto ezimbalwa. Ukuba iinkomo zityebile luphawu oluhle kwaye ukuba zibhityile luphawu olucacileyo lweengxaki ezilula.
Kubalulekile ukuba uzame ukukhumbula zonke iinkcukacha ezithe zenzeka ephupheni lakho lilonke. Le nzame iya kwenza ingqiqo ngakumbi kwaye iya kuba nomdla ngakumbi kuwe, kuba iya kwenza ingqiqo yokwenyani. Namhlanje uyazi ngokuthe ngqo zonke iintsingiselo kwaye uya kuba nakho ukuthatha unonophelo lokuba oku kuyenzeka.
Ukuba uphuphe ngesi silwanyana, luphawu olomeleleyo kakhulu lokomelela, unyamezelo kunye nokhuseleko. Ukuphupha iinkomo ezityebileyo luphawu olucacileyo lokuchuma kuzo zonke iindawo zobomi bakho. Ukuba ubhityile, kubalulekile ukugcina ukholo kuThixo kwaye usebenzele ukoyisa bonke ubunzima.
Ukuba nolu hlobo lwamaphupha, kuba inokusoloko inzima kwaye le yinto embi kakhulu. Ukuphupha iinkomo luphawu lokuba kuya kufuneka unake kwaye ungavumeli iingxaki ziqhubeke. Uya kuthi emva koko ube nethuba lokwazi zonke iintsingiselo kwaye oko kuhlala kubalulekile.
Iinkomo ezityebileyo okanye ezityebileyo kunye neenkomo ezinobulali okanye ezomeleleyo
Ukuba uphuphe iinkomo ezityebileyo luphawu lokhuseleko olukhulu kunye novuyo, kuba ukuba ubhityile oko kubonisa ubunzima. Ukuba isilwanyana sithobekile, siya kuba nolonwabo losapho kunye nokunxulumene nabahlobo. Kwimeko yesibindi, kubalulekile ukuba bahlale behlawula ngakumbi ngakumbi kwicala labo leemvakalelo.
Zama ukufunda ukuba eso sizathu kufuneka sihlale sikhokela iimvakalelo zakho hayi enye indlela. Nangona inzima njengoko inokubonakala, kuhlala kungcono ukuba ulumke ngakumbi kwaye umamele icala elinengqiqo.
Iinkomo zilele, zixheliwe kwaye zafa
Olu hlobo lwamaphupha lunokubonisa iimeko ezahlukeneyo ekungekho lula ukuzitolika. Ukuphupha ngokulala kweenkomo luphawu lwamaxesha anzima kwisangqa sabahlobo. Ukuba isilwanyana siwile, luphawu lokuba kuya kufuneka luqhubeke nokuba nokholo kwaye ngakumbi ukukholelwa kuThixo.
Ukuba ibhokhwe ifile iluphawu lokuba abantu abayenzakalisayo abayi kuyeka kwangoko. Zama ukubulela uThixo ngokusoloko ekukhathalele kwaye ejonge kuwe, kuba nokuba kungabonakala kubi kangakanani na, soze akushiye.
Ngeenkomo ezimhlophe, mnyama, emdaka okanye ezinamachokoza
Umbala omnyama ubonakalisa ukuba udiniwe kukungcakaza kwaye ke jonga into ethe kratya. Umbala omhlophe uhlala unxulumene nothando olutsha oluvela ebomini bakho kwaye ukuba lumdaka luphawu olucacileyo lokuba iindaba ezimnandi ziyeza. Ukuba kufunyenwe uya kuba nethamsanqa ngakumbi kwishishini, oko kuthetha ukuba lixesha lokugxila kwelo cala.
Kungcono ukuzama ukukhumbula zonke iinkcukacha ezithe zenzeka ephupheni lakho. Ngayiphi na imeko, kubalulekile ukuhlala unamathele kuThixo kwaye ngaphezulu kwako konke: ukuqhubeka ulwela zonke iinjongo zakho.
Iinkomo zibaleka, zitsala iinqwelo, okanye zisitya emadlelweni
Ukuba uphuphe ukuqhuba izilwanyana luphawu olucacileyo lokuba ubomi bakho buza kuhamba kwishishini lobungcali. Ukuphupha ngokunyusa imfuyo kakuhle ukuze unyuselwe. Uya kuba nakho ukunyuka udidi, umphathi wakho ukujongile, kwaye kubalulekile ukuba usebenzise lonke ithuba.
Isigaba esihle kakhulu siza kuza ebomini bakho, ke thowusta eli xesha litsha kwaye usebenze nzima kakhulu ngalo lonke ixesha. Ukuba wenjenjalo, unokuba nethuba lokuqhubeka unandipha eli xesha ngovuyo olukhulu.
Kungekudala uza kuba nethuba lokufezekisa zonke iinjongo zakho kunye nokuphupha kweenkomo kuqhambuko lomzimba. Umzuzu ucela ukuba wenze elona nqanaba, kuba kungathatha ixesha ukubuya. Kubalulekile ukuba ufunde ukuba ubomi livili elikhulu lethamsanqa, uyenyuka kwaye emva koko, ngokuqinisekileyo, wehla.
Zama ukuphonononga eli xesha litsha lokwazi ngokwakho ukuze uqhubeke nokukhula. Nokuba isigaba sibi kangakanani na okanye sibhetele, kuhlala kubalulekile ukubulela uThixo kwaye uhlala uzama ukwenza okusemandleni akho.
Ngaba ukuphupha iinkomo luphawu olulungileyo?
Nantoni na ekukuxwayisa ingathathwa njengophawu olulungileyo kwaye konke kuya kuxhomekeka kutoliko. Kuqhelekile ukucinga ukuba into embi luphawu lokuba into engalunganga izakwenzeka, akusoloko kunjalo. Ukuba ungayibona ngenye indlela, unokuqonda ukuba sele ulumkisiwe kwaye unexesha lokuzilungiselela.